Lithuania kwuwapụta ọnọdụ mberede na oke Belarus maka mwakpo ndị na-akwaga mba ọzọ n'ụzọ iwu na-akwadoghị
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ kacha ọhụrụ Lithuania » Lithuania kwuwapụta ọnọdụ mberede na oke Belarus maka mwakpo ndị na-akwaga mba ọzọ n'ụzọ iwu na-akwadoghị
Akụkọ Belarus • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Crime • Akụkọ Ọchịchị • Ihe Ndị Ruuru Mmadụ • Akụkọ kacha ọhụrụ Lithuania • News • ndị mmadụ • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Lithuania kwuwapụta ọnọdụ mberede na oke Belarus maka mwakpo ndị na-akwaga mba ọzọ n'ụzọ iwu na-akwadoghị.
Dịka usoro dị ugbu a si dị, ndị Seimas (ụlọ omeiwu) nwere ike ịkpọpụta ọnọdụ mberede na arịrịọ gọọmentị.
A na-atụ aro ka akpọpụta usoro ọchịchị mberede maka opekata mpe otu ọnwa.
Ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị na-akwaga mba ọzọ n'ụzọ iwu na-akwadoghị na ndị ọchịchị Belarus na-agba mbọ ịbanye na Lithuania.
Mba ndị European Union na-ebo Minsk ebubo na ọ kpachaara anya ịrị elu nke nsogbu ahụ ma kpọọ maka mmachi ọzọ megide Belarus.
Gọọmenti Lithuania, na nzukọ nke taa, ekwupụtala iwebata ọnọdụ mberede na mpaghara ndị gbara agbata obi Belarus n'ihi iju mmiri nke ndị na-akwaga mba ọzọ n'ụzọ iwu na-akwadoghị, na-eduzi ma na-akwado ya. Belarusian ndị ọchịchị, na-agbalị ịfefe ókè-ala n'ụzọ na-akwadoghị n'ime EU Obodo Baltic.
Prime Minista Ingrida Simonyte kwuru, "Emere mkpebi a na-eburu n'uche mkparị nke ọnọdụ dị na mpaghara oke, anyị na-enyefe ya maka nkwado ndị omeiwu." Dịka usoro dị ugbu a si dị, ndị Seimas (ụlọ omeiwu) nwere ike ikwupụta ọnọdụ mberede na arịrịọ gọọmentị.
Dị ka atụmatụ nke Ministry of Interior si kwuo, ọnọdụ mberede ahụ ga-adị irè malite n'etiti abalị na November 10 na mpaghara ókè na n'ime kilomita 5 site na ya yana ebe obibi maka ndị njem si mba Africa na Asia bụ ndị. banye na Lithuania site na Belarus.
Ka ọ dịgodị, Belarusian Onye ọchịchị aka ike Alexander Lukashenko kwuru na Tuesday na ọ na-eche na enwere ike ịtụ anya ọtụtụ ndị si Afghanistan na-akwaga mba ọzọ n'oge adịghị anya.
Dị ka Lukashenko si kwuo, ndị njem si Afghanistan erutela Belarus site na Central Asia Republic na Russia.
Ndị na-akwaga n'ụzọ iwu na-akwadoghị na-eduzi ha ozugbo, mgbe ụfọdụ a na-edukwa ha Ndị ọchịchị Belarus ruo n'ókè Polish na Lithuania.
European Union mba na-ebo Minsk ebubo na ọ kpachaara anya ịrị elu nke nsogbu ahụ ma na-akpọ maka mgbakwunye ọzọ megide Belarus.
Ọnọdụ dị na ókèala Polish-Belarusia dara nke ukwuu na Mọnde, mgbe ọtụtụ puku ndị kwabatara rutere n'ókè Poland. Ụfọdụ n’ime ha nwara ịkwatu mgbidi waya a kpara akpa wee gbaba na Poland. Ndị mmanye iwu na Poland jiri gas anya mmiri kwụsị ndị na-akwaga mba ọzọ.